ကမ္ဘာ့ဘောလုံးစင်မြင့်မှာတော့ Low Profile အသင်းဖြစ်တဲ့ ပနားမား
19 Jun 2018 . 4:26 PM
ကွန်ကာကပ်ဖ်ဇုန်မှာ အားအနည်းဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ ပနားမားအသင်းဟာ အခုတစ်ကြိမ်မှ ပထမဆုံး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအဖြစ် ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ ဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှုတချို့ရယူခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးစင်မြင့်မှာတော့ ပနားမားက Low Profile အသင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ ကိုယ့်ထက် အင်အားကြီးတဲ့ အမေရိကန်၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲအောင် မြင်ခဲ့တာကတော့ လေးစားစရာပါပဲ. . .
ပနားမားအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ ကစပြီး ၁၉၇၄ ခုနှစ်အထိ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ၁၉၇၈ ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ခြေစစ်ပွဲဝင်ခွင့်ပေမယ့် တစ်ကြိမ်မှ အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ပြိုင်ပွဲသက်တမ်း(၈၈)နှစ်အတွင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပနားမားအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းခြေစွမ်းမာကျောမှုကြောင့် ရလဒ်ကောင်းတွေရယူနိုင်ခဲ့ပြီး အိမ်ကွင်းမှာ မက္ကဆီကိုနဲ့အမေရိကန်တို့ကို သရေကစားခဲ့တယ်။ ခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ ကော်စတာရီကာနဲ့ နောက်ဆုံး အိမ်ကွင်းပွဲမှာ (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဟွန်ဒူးရပ်စ်နဲ့ (၁၃)မှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့် အုပ်စုတ တိယနဲ့ တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့တာပါ။
ပနားမားအသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေက ဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေမှာပါ။ ခြေစစ်ပွဲတစ်လျှောက်မှာ ၀ါရင့်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဂါဘရီယဲလ်ဂိုးမက်ဇ်Gabriel Gómez ၊လူးဝစ်တီဂျာဒါ Luis Tejada၊ ရိုမန်တောရက်စ် Román Torres စတဲ့ ကစားသမားတွေက အသင်းရဲ့အဓိက ကစားသမားတွေဖြစ်ကြပြီး ၀ါရင့်ကစားသမားတွေနဲ့ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့များပါတယ်။
Photo:Sporting News,Daily News
ကမ်ဘာ့ဘောလုံးစငျမွငျ့မှာတော့ Low Profile အသငျးဖွဈတဲ့ ပနားမား
ကှနျကာကပျဖျဇုနျမှာ အားအနညျးဆုံးအသငျးဖွဈတဲ့ ပနားမားအသငျးဟာ အခုတဈကွိမျမှ ပထမဆုံး ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအဖွဈ ခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့တာပါ။ ဒသေတှငျးပွိုငျပှဲတှမှော အောငျမွငျမှုတခြို့ရယူခဲ့ပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးစငျမွငျ့မှာတော့ ပနားမားက Low Profile အသငျးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမှာ ကိုယျ့ထကျ အငျအားကွီးတဲ့ အမရေိကနျ၊ ဟှနျဒူးရပျဈတို့ကို ကြျောဖွတျပွီး တိုကျရိုကျခွစေဈပှဲအောငျ မွငျခဲ့တာကတော့ လေးစားစရာပါပဲ. . .
ပနားမားအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲစတငျကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ ကစပွီး ၁၉၇၄ ခုနှဈအထိ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ ၁၉၇၈ ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှဈအထိ ခွစေဈပှဲဝငျခှငျ့ပမေယျ့ တဈကွိမျမှ အောငျမွငျခဲ့ခွငျးမရှိဘဲ ပွိုငျပှဲသကျတမျး(၈၈)နှဈအတှငျးမှာ ပထမဆုံးအကွိမျခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပနားမားအသငျးဟာ အိမျကှငျးခွစှေမျးမာကြောမှုကွောငျ့ ရလဒျကောငျးတှရေယူနိုငျခဲ့ပွီး အိမျကှငျးမှာ မက်ကဆီကိုနဲ့အမရေိကနျတို့ကို သရကေစားခဲ့တယျ။ ခွစေဈပှဲအောငျဖို့ အရေးပါတဲ့ ကျောစတာရီကာနဲ့ နောကျဆုံး အိမျကှငျးပှဲမှာ (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့ပွီး ဟှနျဒူးရပျဈနဲ့ (၁၃)မှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြကွောငျ့ အုပျစုတ တိယနဲ့ တိုကျရိုကျခွစေဈပှဲအောငျခဲ့တာပါ။
ပနားမားအသငျးရဲ့ ကစားသမားတှကေ ဘောလုံးပရိသတျတှအေတှကျ အစိမျးသကျသကျဖွဈနမှောပါ။ ခွစေဈပှဲတဈလြှောကျမှာ ဝါရငျ့ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဂါဘရီယဲလျဂိုးမကျဇျGabriel Gómez ၊လူးဝဈတီဂြာဒါ Luis Tejada၊ ရိုမနျတောရကျဈ Román Torres စတဲ့ ကစားသမားတှကေ အသငျးရဲ့အဓိက ကစားသမားတှဖွေဈကွပွီး ဝါရငျ့ကစားသမားတှနေဲ့ပဲ ယှဉျပွိုငျဖို့မြားပါတယျ။